iOS 11 ichabvisa junk kubva kune zvinongedzo kuti ikuendese kune yekutanga | IPhone nhau
iOS 11 ichabvisa junk kubva kune zvinongedzo kuti ikudzosere kune yekutanga
Kwenguva yakati zvino, mazhinji emapeji ewebhu atinoona pane edu nharembozha akaratidzirwa zvakasiyana kubva pamapeji ekutanga. Aya ndiwo maratidziro eGoogle AMP, iyo iyo kambani inoisa pekutanga mumhedzisiro yeinjini yayo yekutsvaga patinoiwana kubva kunhare mbozha, uye izvo zvine zvakawanda zvakanaka maererano nekutakura nekukurumidza uye dhata reti mutengo.
Iwo mapeji anoratidzwa achipa pekutanga kune izvo zvirimo, kudzikamisa mazhinji ezve kushambadza uye kubvisa zvisina basa zvemukati, zvakafanana neapo patinochengeta zvinongedzo mumasevhisi akadai sePocket kana Kuverengeka. Apple inoita kunge isiri kutsigira izvi, ndosaka muIOS 11 yawedzera system inobvumidza kuteedzera AMP chinongedzo kubvisa zvese zvinowedzerwa neGoogle uye chete chekutanga chinongedzo kuchinyorwa ndicho chakagovaniswa.
Nei uchirega Google AMP? Pfungwa dzakasiyana kwazvo uye dzimwe nguva dzinopesana zvachose. Ichokwadi kuti nekuda kweGoogle AMP kumhanyisa kurodha kwewebhu kunovandudzika, uye izvo zvinovandudza zvakanyanya ruzivo rwevashandisi izvo zvavanoda kuona zvirimo zvechisungo izvo zvavadzvanya nekukasira. Izvi zvinonyanya kuoneka pamapeji enhau sesu, zvisinei pane mamwe marudzi emawebhusaiti hazvimboonekwe. Asi hazvisi zvese zvinopenya igoridhe, nekuti zvakare inoparadza zvachose dhizaini yewebhu, chimwe chinhu chinoshandiswa zvakanyanya uye mari inoiswa mari., uye kuti Google inodarika zvachose ichipa zvakafanana dhizaini kune ese mapeji.
Ngazvive sezvazvingaite, Apple inoita kunge haidi kuti tigovane Google AMP zvinongedzo, uye ndosaka uchiteedzera chinongedzo cherudzi urwu kubva ku iPhone yedu ichabvisa zvese "zvisina basa" izvo zvinowedzerwa neGoogle kuchibatiso, zvichititora kuenda kuchikwata chekutanga chechinyorwa, chinova icho chatinogovana paWhatsApp, Teregiramu kana chero rimwe basa ratinoshandisa. Ngatirangarirei kuti zvimwe zvinhu zvitsva muSafari zvese paIOS uye macOS zvakare zvine chinangwa chekudzivirira hutongi hwese uhwo Google iine pamusoro pedu kubhurawuza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 ichabvisa junk kubva kune zvinongedzo kuti ikudzosere kune yekutanga
Ngatione kana tikadzidza pano pawebhusaiti kudzora zvishoma nyaya yemashambadziro yauri kutobuda zvishoma kubva mutsetse.
Apple inogadziridza Apple News nhau mupepeti
Aya ndiwo marongero achaitwa HomePod muIOS 11